ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ်မှုများကို လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ | Myanmar In Singapore
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အရေးတကြီးသွားရောက်ရန် လိုအပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်
Spass or EP ကိုင်ဆောင်ထားသူများအား အလုပ်ဆင်းခွင့်ပြု၊ မပြု Application ထဲတွင် စစ်ဆေးနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အလုပ်မဲ့လူဦးရေ မြင့်တတ်ခဲ့
လက်ဘနွန်မြို့တော်မှာ ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူအများအပြားသေဆုံးပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရခဲ့
မန္တလေးလူငယ်သင်တန်းကျောင်းမှ ဒုတိယမြောက်သေဆုံးသူ မောင်ခိုင်ဇော်ထွန်း၏ နာရေးပြုလုပ်
စင်ကာပူရှိ Work Pass ကိုင်ဆောင်သူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ
COVID-19 ကာလအတွင်း စင်ကာပူတွင် စျေးဝယ်ထွက်မည်ဆိုလျှင် NRIC / FIN card မဖြစ်မနေ ယူဆောင်သွားရန် လိုအပ်
အဆိုတော် မီးမီးခဲ ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာ သတင်းမှားသာဖြစ်ပါကြောင်း မီးမီးခဲ ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီ
စင်ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား Special Pass Extension နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပေးကြေငြာချက်
TOPSHOT – Laboratory technicians work on testing samples from people to be tested for the COVID-19 coronavirus atalaboratory in Shenyang in China’s northeastern Liaoning province on February 12, 2020. – The death toll from China’s deadly COVID-19 coronavirus epidemic climbed past 1,100 on February 12 but the number of new cases fell forasecond straight day, as the World Health Organization urged global unity to combat the “grave threat”. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ်မှုများကို လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့
ဘာလင်၏ Tegel လေဆိပ်သည် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အကြီးစား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ လေယာဉ်များသည် လာမည့်သီတင်းပတ် မှစတင်၍ ခရီးသည်အမြောက်အများအတွက် အခမဲ့ မလုပ်မနေရစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစမ်းသပ်ခန်းအတွက် အခန်းနှစ်ခန်းကို ခွဲထားသော်လည်း လေဆိပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပိုကြီးသောနေရာ ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် အာဏာပိုင်များက လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု ဖော်ပြနေပါသည်။
လပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့ခံရပြီးနောက် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အတော်လေးအမြန်ပြန်လာသူများအတွက် စပိန်နိုင်ငံကဲ့သို့သော ဥရောပအနှံ့ကူးစက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့် လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် မျှော်လင့်ချက် ပျက်ပြားသွားသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ အလုပ်အများဆုံးဖြစ်သော Frankfurt စသည့် လေဆိပ်များတွင် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်၌ ရောဂါကူးစက်မှုအတွက် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ သို့သော် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် စတင်မည့်ကူးစက်မှုများပြားနေသောနိုင်ငံများမှ လာသည့် ခရီးသည်များကို စမ်းသပ်ရန် ပြင်ဆင်မှုများမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင်ရှိနေသည်။
အင်္ဂါနေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူက လူမှုရေးဝေးကွာသောအလေ့အကျင့်များကို စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့် ပြည်သူလူထုအားဆူပူခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးမရှိခြင်းကြောင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သော မျက်နှာဖုံးများကို ၀တ်ဆင်ထားရန် သတိပေးခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် နေ့စဉ်အသစ်ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက် ၆၃၄ ခုအထိ နှစ်ဆနီးပါးတိုးလာပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၂၀၇,၀၀၀ ခန့်ကူးစက်၍ ၉,၁၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းက သုတေသန၀န်ကြီး Anja Karliczek က လာမည့်နှစ်လယ်မတိုင်မီ ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးနိုင်သော ကာကွယ်ဆေးကို မမျှော်လင့်ရန် လူထုအားသတိပေးခဲ့သည်။
Tags: health International News
Hello! I'm Daiwee. I enjoy the writing content and translating the language. I also enjoy participation dances. More seriously, my friends describe me as easy going,agood listener.
၂၀၂၀ ပထမနှစ်ဝက်တွင် လေနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀% ကိုထုတ်လုပ်
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှတင်သွင်းသော ကြက်များတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးနေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရှန်ကျန်းကပြော
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ပတ်အကြာတွင် ရရှိနိုင်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံပြောကြား
“ဆိုးပေ”ဇာတ်လမ်းမှာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင်လို့ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
မြေဂရန်အတု ပြုလုပ်မှုဖြင့် မန္တလေးစည်ပင်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ၁၁ ဦးကို အရေးယူ
ဧရာဝတီ လင်းပိုင်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အနုပညာရှင်များ တိုက်တွန်း
၂၀၂၄ ခုနှစ်လောက်မှသာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပတ်နိုင်တော့မည့် လေကြောင်းလိုင်းများ
စင်ကာပူမှာ MRT/Bus ဘယ်လိုစီးမလဲ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မေလ ၂၁ရက်နေ့တွင် ပဉ္စမအကြိမ် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် ပြေးဆွဲမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မေလ ၁၆ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် ပြေးဆွဲမည်
တရားနည်းလမ်းမကျတဲ့ အာမခံ ၁၀သိန်း နဲ့ မင်းရာဇာ ရဲ့ အမှု
ချစ်သူကို ပရိသတ်နဲ့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့ စွမ်းဇာနည်
လစာမဲ့ခွင့်ယူခိုင်းသော အလုပ်ရှင်များအား MOM မှ အရေးယူမည်
ပဟေဠိဆန်လွန်းတဲ့ Covid-19 ကူးစက်ပုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
စင်ကာပူ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Stay Home Notice ဆိုသည်မှာ
© 2020, Myanmar in Singapore. All rights reserved.